चलचित्र ‘शब्द’मा मनोरञ्जन र सेन्टिमेन्ट दुवै छ : शिवाकोटी
काठमाडौं, २४ पुस – यही माघ २९ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र शब्द पछिल्ला दिन चर्चामा छ । सौगात मल्ल अभिनित चलचित्र शब्दमा गुरुङ गाउँको एउटा कथालाई चलचित्रमार्फत देखाउन खोजिएको छ ।
चलचित्रमा सौगात मल्ल, अनुभव रेग्मी, कमली वाइवा, रोय दिप श्रेष्ठ, अर्जुन गुरुङ, ओसिन भट्टराई लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । चलचित्र शब्दममार्फत निर्देशनमा डेब्यु गरेका सन्तोष शिवाकोटीसँग कथानक वरिपरि रहेर लोकान्तरले छोटो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको छोटो अंशः
चलचित्रको ट्रेलर रिलिजपछि दर्शकबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ?
चलचित्रको ट्रेलर हेरेर दर्शकले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सकारात्मक प्रतिक्रियाले हामी उत्साहित पनि भएका छौं ।
शीर्षक कसरी जु-यो ? यसको शीर्षक र कथानकबारेमा केही बताइदिनुस् न ।
शब्दको अर्थका बारेमा अहिले नखुलाउँदा नै राम्रो होला । हामीले शब्दको अर्थलाई ट्रेलरमा समेत व्यक्त गरेका छैनौं । गुरुङ बस्तीको कथालाई प्रस्तुत गरेका छौं । शब्द शीर्षकले चलचित्रलाई प्रष्ट पार्छ । दर्शकले हलमा गएर चलचित्र हेरेपछि शब्द शब्दको अर्थ खोज्न सक्नुहुन्छ ।
समग्रमा चलचित्र कस्तो छ ? सौगात मल्ललाई नायक बनाए पनि नायिका त नयाँ राख्नुभएछ नि ?
चलचित्रकी नायिका कमली (वाइबा) जी लामो समय विदेशमा बसेपनि नेपाली कला क्षेत्रलाई बुझ्नुभएको रहेछ । उहाँले पहिले पनि एउटा चलचित्र बनाइसक्नुभएको थियो । हामीलाई गुरुङ नायिका चाहिएको र उहाँले काम गर्न सक्ने देखेर नै उहाँलाई नायिकाका रुपमा लियौं । सौगात मल्ल पनि चलचित्रको कथा अनुसार फिट देखेर नै लिएका हौं ।
दर्शकले तपाईको फिल्म किन हेर्ने ? के छ त्यस्तो चलचित्र हेर्नैपर्ने कारण ?
नदेखिएको माया र सम्बन्धलाई चलचित्रमा प्रस्तुत गरेको छु । ग्रामीण भेगको कथा, भेषभुषा, संस्कृति लगायतका कुरालाई कलात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । चलचित्र हेरेपछि मनोरञ्जन र सेन्टिमेन्टबीचको लुकेको कथा हेर्नलाई पनि दर्शक हलसम्म आउनुहुनेछ भन्ने आशा छ । चलचित्रमा मनोरञ्जन र सेन्टिमेन्ट दुवै छ ।
पहिलो डेब्यु निर्देशन गर्नुभएको चलचित्र शब्दका आधारमा कति लामो यात्रा तय गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ ?
पक्कै पनि म यो क्षेत्रमा लामो यात्रा सोंचेर नै आएको हुँ । शब्द हेरेपछिको दर्शकको प्रतिक्रिया त आफ्नो ठाउँमा छ । एउटा चलचित्र निर्देशन गर्नका लागि परिवेश तथा पात्रको चरित्रको गहन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले आफूलाई यो क्षेत्रमा स्थापित गर्छु भन्नेमा ढुक्क छु ।
एउटा चलचित्रका लागि कति समय दिनुभयो?
पूरै समयलाई ख्याल गर्ने हो भने त हामीलाई यसको सेटअप देखि, संयोजनसम्म १४ महिना लागेको थियो । सुटिङ भने हामीले ३५ दिनमा सकेका थियौं । पुस २४, २०७३ मा प्रकाशित